Ụlọ nwanyị Museum nke Denmark, Museum Museum - Århus
Ụlọ nwanyị Museum nke Denmark
Adreesị: Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus, Denmark
Ekwentị: +45 25 45 45 10
Ụbọchị mmepe: 1984.
Oge ọrụ: Tuesday, Thursday-Saturday 10.00 - 17.00, Wednesday 10.00 - 20.00, Sunday - 10.00 - 16.00 (Monday - closed)
Aarhus bụ isi obodo Denmark , nke dị n'etiti ya bụ ebe ọtụtụ omenala na akụkọ ihe mere eme dị na ya, gụnyere Ụlọ Ọrụ Ụmụaka Danish (Kvindemuseet na Danmark).
Banyere ihe ngosi nka
Ụlọ ihe ngosi nka nwere ụlọ nke si na 1941 ruo 1984 e nwere ndị uweojii, na ọdịda afọ 1984, Danish Women's Museum meghere ọnụ ụzọ maka ndị ọbịa mbụ. Enwere otutu ihe ngosi: site na akwukwo na foto gaa n 'ulo oru siri ike na umuaka ndi nwanyi. A na-enweta ihe ngosi maka ihe ngosi nka nke nta: ụfọdụ n'ime ha zụtara n'aka ndị nwe ha, ụfọdụ ndị na-enye onyinye ma ọ bụ ụmụ amaala nkịtị nyere onyinye. Na ihe ngosi ị nwere ike ịkọ akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ na ọrụ ụmụ nwanyị na akụkọ ihe mere eme, mara nke ọma ndụ ndị Scandinavian, ọdịnala ndị na-amalite n'oge ochie na ruo n'oge ugbu a.
Kwa afọ, ndị nleta ihe karịrị 42,000 na-eleta Women's Museum of Denmark, ebe ọ bụ na 1991 Kvindemuseet na Danmark enwetawo ọnọdụ nke ihe ngosi nka nke mba. Ịga ndị nleta ahụ bụ 2 ngosi na-adịgide adịgide - "Ndụ nke Ụmụ nwanyị Site na Oge Oge Oge Anyị" na "History of Childhood of Girls and Boys", E wezụga nke ahụ, enwerekwa ngosi nke oge dị iche iche nke ndị na-ese ihe, foto, na ihe ọ bụla.
Iji mara ihe ngosi nke Museum Museum nke Danish, ọ bụghị nanị na ị ga-eleta ya n'onwe ya, kama ọ na-enwekarị: na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ebe a na-anakọta ihe ngosi ihe ngosi nka, Kvindemuseet na Danmark na-eduga njem ụmụaka.
Ị nwere ike izuike na iko kọfị ma ọ bụ iko mmanya n'ime cafe na ụlọ ngosi ihe nka. A na-enye ndepụta naanị site na nchịkwa anụ ụlọ nke a kwadebere dịka ntụziaka ochie.
Kedu mgbe ị ga-eleta?
Kvindemuseet na Danmark na-arụ ọrụ na-esonụ: September-May - site na 11.00 ruo 16.00, June-August - site na 11.00 na 17.00 awa. Ụlọ ihe ngosi nka dị na etiti obodo ahụ, ị ​​ga-ejide ụkwụ ma ọ bụ site n'ụgbọala akwụ ụgwọ . Ụgbọ njem ọha na eze na- akwụsị n'ebe ahụ, nkwụsị bụ Kystvejen, Navitas.
Ihe ngosi nka na mmiri
Ụlọ Ngosi ihe
The "Imagine the World" Tower
Oghere okporo ụzọ okporo ụzọ (Chaplin)
Kedu otu esi asa akwa akpụkpọ ụkwụ?
Kim Kardashian laghachiri netwọk mmekọrịta, ma ọ dịbeghị njikere ịga
Nda akwa pink
Olee otú ịkwụsị iche banyere mmadụ?
Ịmụta na ọ gaghị ekwe omume: Margot Robbie na-anakọta ibu maka ọrụ ị ga-arụ na ya?
Denim Capri Women's 2013
Lake Ritsa dị na Abkhazia
Ememe na Honduras
Meatballs maka ofe - uzommeputa
Okpokoro klaasị nke kuku - nkasi obi na ọrụ
Mbadamba teepu foto maka kichin
Uhie uhie n'ime oghere
Kedu ihe ọdọ mmiri ahụ na-atụ banyere ya?
Esi echekwa Peking kabeeji maka oyi?
Na-ekpuchi efere na cupboard
Funny pajamas maka ụmụ agbọghọ
Ngwongwo dị iche iche